आँखा र नाक नभएको बच्चा जन्मेपछि चिकित्सक निलम्बनमा ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
आँखा र नाक नभएको बच्चा जन्मेपछि चिकित्सक निलम्बनमा !
October 25, 2019 Nepal E News
पोर्चुगलमा एक नवजात शिशुको आँखा, नाक र टाउकोकोे केही भाग नै नभएको पाइएपछि त्यो मामिला हेरिरहेका चिकित्सक निलम्बनमा परेका छन् । नवजात शिशु रोड्रिगोको अवस्थाका बारेमा उनका अभिभावकलाई पहिला नै केही पनि जानकारी दिइएको थिएन । यो महिनाको शुरुमा उनी जन्मेपछि मात्रै अभिभावकहरुलाई बच्चाको अवस्था जानकारी भएको थियो ।
मेडिकल काउन्सिलको बैठकमा मतदान हुँदा डा. अर्तुर कारभाल्होलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा बहुमत जुटेको हो । पोर्चुगलका मिडियाले सो घटनापछि चौतर्फी आक्रोश उत्पन्न भएको जनाएका छन् । डा. कारभाल्हो भने अहिले मिडियाको सम्पर्कमा आएका छैनन् । रोड्रिगोको जन्म यही अक्टोबर ७ तारेखका दिन स्थानीय साओ बर्नार्डो अस्पतालमा भएको हो । यो स्थान राजधानी लिस्वनबाट४० किमीको दूरीमा रहेको छ । बच्चाका आमाबाबु डा कारभाल्होकै रेखदेखमा रहेका थिए ।
तर उनले परिवारका सदस्यलाई बच्चाको समश्याबारेमा बताएका थिएनन् । अल्ट्रासाउण्ड गर्दा पनि केही भाग देखिएको थिएन । तर, चिकित्सकले भने कहिलेकाहीं अल्टासाउण्डमा पनि केही नदेखिने बताएका थिए । दुई साता भइसक्दा पनि सो बच्चा अझै अस्पतालमा जीवित रहेको छ । बच्चाका आमाबाबुले डा. कारभाल्होको विरुद्ध पोर्चुगलको अभियोजकको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । अहिले बच्चाको यो घटना आएपछि डा. कारभाल्होका विरुद्धमा धमाधम उजुरी पर्न थालेका छन् ।
उनका विरुद्धमा सन् २०१३ यताका ६ वटा उजुरी परेका छन् । कसरी स्वास्थ्य सेवा पोर्चुगलमा चलिरहेको छ भन्ने यसबाट पुष्टि भएको भन्दै सर्बसाधारणले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।श्राेत hamropatro
तिहारमा लक्ष्मीमातालाई खुसी पार्न चढाउनुहोस् यी पाँच चीज
मिचोआकानमा विमान दुर्घटनामा परी पाँच जनाकाे ज्यान गयाे